Miyuu Maurizio Sarri CR7 Ka Dhigi Doonaa CR9 Oo Uu Weerarka Dhexe Ka Ciyaarsiin Doonaa? Sarri Qudhiisa Oo Su'aashan Muhiimka Ah Ka Jawaab Celiyay. - Gool24.Net
Tababaraha kooxda Juventus ee Maurizio Sarri ayaa ka hadlay wararka sheegaya inuu hoggaamiyaha kooxdiisa cusub ee Cristiano Ronaldo ka dhigi doono mid ka dheela booska weeraryahanka dhexe oo uu kasoo wareejin doono garabka bidix.
Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkii hore boosas badan oo weerarka ah uga soo ciyaaray Juve isaga oo kulamo ka dheelay labada garab, Kulamada qaar weerar dhexe ahaa marar badana weerarka dhexe kala ciyaaray Paulo Dybala.
Ronaldo ayaa inta badan waayihiisa ciyaareed kasoo ciyaarayay garabka bidix oo ahaa halkii uu kaga soo hilaacay kooxaha Man United iyo Real Madrid balse dhawaan ayay soo baxeen warar xusayay in Sarri uu weerar dhexe ka dhigi doono.
Haddaba, 60 jirka ree Talyaani ayaa haatan sheegay in Ronaldo uu boos kasta oo weerarka ah uga ciyaari karo kooxdiisa balse uu isagu u adeegsan doono kulamada hore booska garabka bidix ee uu caanka ku yahay.
Maurizio oo arrimahaas ka hadlaya ayaa yidhi “Waxaan ugu horreyn Cristiano u adeegsanayaa garabka bidix, Laakiin xaqiiqdii tayada uu leeyahay waxa uu ka ciyaari karaa meel kasta, Isagu waa mid aad u khibrad badan waxkastana wuu kusoo guuleystay, Shaqsiyan iyo wadar ahaanba”
Kulanka ugu horreeya ee xilli ciyaareedka ka horreeya ee uu Sarri ku tijaabin karo Ronaldo ayaa ah midka ka tirsan ICC Cup ee ay dalka Singapore kula ciyaari doonaan kooxda Tottenham.
Xiddigaha kulankaas kasoo muuqan kara markoodii ugu horreysay ee ay Juve metelaan ayay kamid yihiin Matthijs De Ligt oo tababarkiisii ugu horreeyay qaatay iyo waliba saxeexyada cusub ee Rabiot iyo Ramsey.